कथा– गल्ती उनको कि मेरो ? - Sisne Online
कथा– गल्ती उनको कि मेरो ?
म पनि कस्तो सोझो ! भर्खरैको कुर्कुरे बैँस ,शहरको वातावरण । त्यसमा पनि rose day एउटा साथिलाइ facebook मार्फत फुल पठाए साथिले thank you भनिन् । कुरा हुदै गयो ।
दिन रात उसको मेरो हरेक कुरा साटासाट हुँदै गयो । मलाई पनि कस्तो love पार्न मन लगेको थियो । सबैभन्दा लाजको कुरो त मेरो सबै साथिको लभ परेको थियो । कलेजमा गयो , साथि सङ घुम्न गयो म एक्लै ! साथिहरु जिस्काउन थाले लभ पार्न सकेन भनेर । फुल पठाएको साथिले मेरो कुरो बुझिछन । तर के गर्ने उनको love अगाडि नै परिसकेको रहेछ ।
एक दिनको कुरा हो साथि उनको साथिहरु सङ घुम्न गयछ्न । त्यस बेलामा मेरो कुरो चलेछ । साथि नै हो हरेक कुरा share हुन्छ । म उनको म्यासेजको प्रतिक्क्ष।मा थिए । उनले दिउँसोको फोटो पठाइन । त्यस लगत्तै एउटा facebook requst आयो । मैले प्रोफाइल खोली हेरे
मेचुअल फ्रेन्डमा मेरो साथि जुन मैले फुल पठाएको ऊनी थिइन । उनलाइ सोधे “ उनले मेरो साथि हुन भनिन ” म पनि ऊनीलाइ accept गरे । अब साथिको साथिले हाइ भनिन म बोल्दैइ गय । कुरा त गज्जबले भयो । म पनि साथिसङ बोल्न न डराउनि उनी पनि बोल्दै गइन ।
हुदा हुदै उनी आफै लभको कुरा गर्न थालिन । उनले मलाई सोधिन “ हजुरको लभ परेको छ कि नाइँ ” म रन भुल परे । परेको छ भनी कसरी भनु परेकै छैन , परेको छैन कसरी भनु लाजै लाग्यो । बल्ल बल्ल नाइँ भने होइन होला भनिन यति राम्रो मन्छेले नि किन नपारेको त भनिन । म भने हामी जस्तो लाइ कस्ले हेर्छर यस्तै यस्तै कुरा हुदै गए ।
ऊनी मलाई मन परिसकेकी रैछन म चाहिँ साथि नै सम्झिए । किन किन मलाई ऊनी मन परेको थिएन । ऊनी मलाई माया गर्दै गइन । म भने उनको माया मा बिस्तारै बिस्तारै तलिन हुदै गए । हामी कुरा गर्न लगेको एक महिना जति भयो । उनले एउटा कुरा सोधु भनेन म हुन्छ भने उनी मलाई म तिमिलाइ माया गर्छु तिमी सुइकार भनिन ।
म अचम्म परे म उनी लाइ म पछी भन्छु ल भने , म तल्लीन भए । उनको मेरो भेट हुने कुरा थियो कारण बस भेट भएन । मलाई पनि ऊनी बिस्तारै बिस्तारै मन पर्न थाल्यो । उनको purpose accept गरे । समय बित्दै गयो हामी बोल्न लएको पनि चार पाँच महिना भयो ।
म उन लाइ असाध्य माया गर्न थाले । उनी त म भन्दा अगाडि बाट नै माया गर्थिन । समय बित्दै जादा उनको नजरमा म नराम्रो हुदै गए । ऊनी सङ्का गर्न थालिन । म चोखो माया म सङ्खा हुन्छ भन्दै गए ।
हामी भेट हुने भन्दा भन्दै हाम्रो समयनै मिलेन । पढाईको सिलसिलामा म काठमाडौ आए । जब म काठमाडौ आए त्यस पछि उनले म प्रतीको माया घटाउन थालिन । खै उनको चाहना पुराउन नसकेर त होल । म भने उनलाइ अब छोड्नै नसक्ने भैसकेको थिए ।
म उनी लाइ कति सम्झाउन खोजे तर उनी “ १२ वर्ष रामायण पढ्यो सीता कस्तो जै ” भन्न थालिन ।सधै उनले आफै म्यसेज गर्ने पछि मैले म्यासेज गर्दा उम्म हुम्म मात्र भन्न थालिन । उनी मलाई भुलिदेउ भनिन ! म झाङ मा झरे जस्तै भयो । मैले हाम्रो सम्बन्ध उदाहरण बनाउ भने , उनी म रिलिज गर्न चाहान्न भनिन ।म हरेक कुरा सिकाउन खोजे उनी झगडा सम्झिन । म कुरा गर्न खोज्दा उनी तिमी सङ बोल्न झेउ लाक्छ भनिन । यसो गर्दा हाम्रो कुरा नै झगडा बन्न थालो ।
यस्लाइ भन्छ ” चोक्टा खान गको बुढी झोल मा डुबेर मोरि”
यो वास्तविक होइन एउटा कथा मात्र हो कोसैको जीवन सङ मेल खान गएमा क्षेमा चाहान्छु ।